လကျဆေးဆပျပွာရညျထုတျလုပျပွီး အခမဲ့ဖွနျ့ဝပေေးသှားမညျ့ ကမ်ဘာကြျောကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။ – SoShwe
Home/Tech/လကျဆေးဆပျပွာရညျထုတျလုပျပွီး အခမဲ့ဖွနျ့ဝပေေးသှားမညျ့ ကမ်ဘာကြျောကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
လကျဆေးဆပျပွာရညျထုတျလုပျပွီး အခမဲ့ဖွနျ့ဝပေေးသှားမညျ့ ကမ်ဘာကြျောကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
ကမ်ဘာကြျောဖကျရှငျကုမ်ပဏီကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ Louis Vuitton ရဲ့ ပိုငျရှငျဖွဈသူ Moet Hennessy က လကျရှိကမ်ဘာတဈဝှမျးဖွဈပှားနသေော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကို တိုကျဖကျြရနျအတှကျ လကျဆေးဆပျပွာရညျမြားကို ထုတျလုပျသှားရနျပွငျဆငျနပေါတယျ။ ဇိမျခံပစ်စညျးမြားရောငျးခသြညျ့ အဆိုပါကုမ်ပဏီသညျပွငျသဈနိုငျငံ၊ ပဲရဈမွို့၌ အခွစေိုကျပွီး သူတို့ရဲ့ရမှေေးထုတျလုပျရာ၌ အသုံးပွုသညျ့ ကုနျကွမျးမြားဖွငျ့ လကျဆေးဆပျပွာရညျ ထုတျလုပျရနျ ပွငျဆငျထားကွောငျး ပိုငျရှငျဖွဈသူ LVMH က ပွီးခဲ့သညျ့တနင်ျဂနှနေေ့၌ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ LVMH က “ဒီလကျဆေးဆပျပွာရညျတှကေို ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးတှဆေီ အခမဲ့ဖွနျ့ဝပေေးသှားမှာပါ။” ဟု တရားဝငျအတညျပွုပေးခဲ့ပါတယျ။ နာမညျကြျောအမှတျတံဆိပျမြားဖွဈသညျ့ Christian Dior နဲ့ Givenchy တို့အပွငျ နာမညျကြျောရှနျပိနျဖွဈသညျ့ Moet & Chandon ၊ ကမ်ဘာကြျောနာရီအမှတျတံဆိပျဖွဈသညျ့ Tag Heuer နဲ့ လကျဝတျရတနာ Bulgari တို့ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျသညျ့ LVMH အနဖွေငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ ပတျသကျ၍ လိုအပျနသေညျ့ ကာလတဈလြှောကျလုံး ယခုကဲ့သို့ လကျဆေးဆပျပွာရညျမြားကို ထောကျပံ့ပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး ကုမ်ပဏီက ကွညောခဲ့ပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံ၊ ဝူဟနျမွို့မှစတငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသညျ လကျရှိအခြိနျ၌ ကမ်ဘာအနှံ့အပွားသို့ ပြံ့နှံ့လကျြရှိပွီး အထူးသဖွငျ့ ဥရောပတိုကျတှငျးမှ အီတလီ၊ စပိနျနဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံတို့၌ အမြားဆုံး ပွနျ့ပှားလကျြရှိပါတယျ။ ပွငျးထနျသညျ့အဆုတျရောငျရောဂါကိုဖွဈပှားစသေညျ့ အဆိုပါဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ပွငျသဈနိုငျငံတှငျး လူသဆေုံးမှုက (၁၂၀) အထိ ရှိလာခဲ့ပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပြံ့နှံ့မှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျရနျအတှကျ ပွငျသဈနိုငျငံတှငျး စားသောကျဆိုငျမြား၊ ကျောဖီဆိုငျမြားနဲ့ အခွားသောအရေးမကွီးသညျ့ စတိုးဆိုငျမြားကို ပိတျသိမျးရနျ ညှနျကွားထားကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်ထုတ်လုပ်ပြီး အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးသွားမည့် ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု။
ကမ္ဘာကျော်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Louis Vuitton ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Moet Hennessy က လက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပွားနေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်များကို ထုတ်လုပ်သွားရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများရောင်းချသည့် အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့၌ အခြေစိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့ရေမွှေးထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် လက်ဆေးဆပ်ပြာရည် ထုတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ LVMH က ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့၌ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် LVMH က “ဒီလက်ဆေးဆပ်ပြာရည်တွေကို ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆီ အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာပါ။” ဟု တရားဝင်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည့် Christian Dior နဲ့ Givenchy တို့အပြင် နာမည်ကျော်ရှန်ပိန်ဖြစ်သည့် Moet & Chandon ၊ ကမ္ဘာကျော်နာရီအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် Tag Heuer နဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ Bulgari တို့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်သည့် LVMH အနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်၍ လိုအပ်နေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ယခုကဲ့သို့ လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်များကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကုမ္ပဏီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဥရောပတိုက်တွင်းမှ အီတလီ၊ စပိန်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့၌ အများဆုံး ပြန့်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ ပြင်းထန်သည့်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေသည့် အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်း လူသေဆုံးမှုက (၁၂၀) အထိ ရှိလာခဲ့ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်း စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များနဲ့ အခြားသောအရေးမကြီးသည့် စတိုးဆိုင်များကို ပိတ်သိမ်းရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈတိုကျဖကျြရေးအတှကျ စမျးသပျကိရိယာ (၅) သိနျးနဲ့ နှာခေါငျးစညျး (၁) သနျး လှူဒါနျးလိုကျသညျ့ ကမ်ဘာကြျောသူဌေးကွီး။
Next ???????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????? ? ? ?